Musha | Kusunungurwa Mushonga
Iva Munhu Waunonyatsoda Kuva!
Yako yakazara tepi yekushandisa yekuzvitungamira yega kuziva kushanduka.
Cheka kuburikidza nezvikamu zvemamiriro akagadziriswa-mhinduro uye maitiro, uye ugove zvauri chaizvo.
Iyo yeAlchemical Utatu ndeye shanduko nyowani yekushandura nzira yekugadzirisa yakagadzirirwa kukugonesa kuve uyo iwe waigara uchiitirwa kuve.
Utatu hune mishonga mitatu yakagadziriswa yakagadziriswa:
Bhuruu Lotus mushonga
Iyi mishonga mitatu inoshanda pamwechete kujekesa izvo zvinotisunga. Imwe neimwe yemishonga iyi ine rimwe rakasiyana basa rekutamba mukuzadza kusarudzika kwemaitiro, magariro uye ndangariro zvinotiita kuti tirambe takamira mukutenda uye mufambiro usingatishande.
ONGORADZA EXCLUSIVE UPDATES
Ndinobvumirana neRuberation Remedy inounganidza mashoko angu kubudikidza neforomu iyi.
Yekare Inyanzvi Yezvokugadzirwa Kwezvinhu Kwemazuva Ano
Rusununguko runotarisa chimiro chemaitiro matsva ekugadzirisa kwevanhu nekuziva kugadzira zvishandiso. Chimwe chekare chekuchira kwechikafu chemakemikari chakamutswa uye chakasimbiswa nemichina yakangobva kuwanikwa yakawanikwa, kuunza hupenyu hutsva kune simba uye rakadzika kuita asi hunyoro hunomutsa chigadzirwa.
Mushonga unofamba hurukuro muhukwanisi hwehwo hwekutsigira vanhu mukugadzirisa kwepfungwa, muviri nemweya kuburikidza nekuchenesa kwemaarmarm emprint uye kusagadzikana kwemafuro emweya. Kusununguka kwezvinotyisa izvi zvinopa simba rimwechete rezve simba kuitira kuti isu tive vose vati tanga tichida kuva kubva pakutanga, vakasunungurwa uye vakasununguka.
Kutevedzera mapapiro ekare, zvakanyatsosarudzwa zvakasikwa zvezvinhu zvakasikwa, zvinyorwa uye zvinyorwa zvinokonzerwa nezera remazuva ano.
Rusununguko runopinda mumatambo ekare uye matsvene mumweya. Izvi zvinomutsa simba rekugadzirira kwepfungwa nekunatswa kwepfungwa.
Kubatanidza mvura yenyika nekubvumira rusununguko kunongora uye kusanganiswa nemvura mitsvene yenyika kuti uzvibatanidze pamwe chete.
Ndezvipi Vamwe Vanoona Kusunungurwa?
Inzwa zvinotaurwa nevamwe pamusoro pezvakaitika kwavari nekusunungurwa. Unhu hwekushandura pane zvepanyama, mupfungwa, mupfungwa uye mune zvekunamata!
Ona Dzimwe Mhinduro
Yekare Yekare Technology
Zvakavanzika zvekare, zvakazarurwa.
Unyanzvi hwezvemweya uye hwemagariro ehupenyu huchigadzira nzira itsva yekuvandudza nekugadzirisa hupenyu hwehupenyu. Rusununguko runoshandisa teknolojia yakangobva kuwanikwa neyemapuranga ekare, ikozvino iri kuwanika kune vose.
focus, simba & balance
Apo kuisa pfungwa kusingashandisi pakushanda kwekare kare kuenzanisa iyo yakadzingwa kubva mumuviri tinokwanisa kuunza simba redu rose kutakura pane chero basa. Izvi zvinoreva zvakare kuti hatishandisi nguva yedu yekugaramo munguva yakapfuura kana kufunganya pamusoro remangwana. Izvi zvinoshandura kuva kuderera kuduku mumuviri, tinodawo kurara zvishomanana apo isu tichifamba nekukurumidza mukati uye kunze kwekuzorora.
Kukura kunze kwekare, ita nzvimbo yeiyo itsva
Patinenge tachenesa mararamiro atinoita tichiwanzoita sechikamu chenhoroondo yedu uye tadzidza kuyeuka, hatisati takabatwa mumatambo emweya muupenyu hwedu. Kusunungurwa kunoita izvi kuburikidza nekuuyisa zvose pasi kuti zvioneke, kunzwa uye nekubudiswa kamwechete uye kwevose. Zvadaro mafungiro anokwanisa kubuda kazhinji kunze kwekugara aine zvido zvekare kuti apindure nenzira ipi zvayo uye isu tinokwanisa zvakare kugovana navo kana kwete pasina chido chekubatwa mumusungo wavo wekunakidza.
Isu tine mukana wokudzura lotus kubva mumvura tisingapindi.
Zvesai Maitiro Akachena
Dzokera kumusha kunzvimbo yako yepanyama
Shandisa simba mukati mazvo zvakanyatsojeka pamusoro pehutungamiri hwako, chinangwa uye basa mune hupenyu huno. Rusununguko runotsigira mumwe mukuzarura kune mukati mukati mutsanangudzo, inobatsira kushamwaridzana nekambasi yavo yepamberi, inotungamirira imwe nguva dzose mumamiriro ehuwandu, kusununguka uye kufara.
Kusunungurwa Kwako, Kurindira.
Mushonga wakakwana wezvisungo, zvakanyatsogadziriswa, zvakagadzirwa uye zvakagadziridzwa kuti zvive, LIBERATION.
Chimiro chekare chemaarchemical chakaitwa kubva ku 9 zvigadzirwa chimwe nechimwe chave chapiswa nguva 100 kusunungura kudzika kwavo kwakadzika nekugadzirisa karmic.
Maminerari anochenesa mvura uye anoita sechinhu chinokonzera magetsi. Sezvo ropa riri kunyanya mvura iri rine simba rakadzika uye rine simba pane ropa rinotakura pfungwa dzedu.
Guruva rakaunganidzwa uye rinogona kubva mumoto we4 wakanga uchipfuta uchienderera mberi kwemakore ekupedzisira e50. Moto wechishanu ndiro zuva. Iyi madhirairi inomiririra kutarisa kusina kushandiswa kwemakore makumi mashanu ekushandurwa nekuchenesa.
Durga inotenderera mantra mutsara yekushandura nekushandura, zvichibvumira kuitika kwezviitiko kuti zvibudirire zvakanyanya sezvo zvinhu zvakajeka
Inoita kuti inenge yakaita semwana ichisiye rufaro rushoma rwezvinhu zviduku, manzwiro omwana anotarisa bhiripu kwekutanga.
An adaptogenic mushroom inobatsira kusungira zvose zvigadzirwa pamwe chete, zvichiita kuti zvive nehuwandu uye kuenzanisa
Kusununguka Izvo Globe.
Kuparadzira rusununguko kuburikidza nehutano hwevako uye veparadzi vese. Kubatanidza simba, mvura uye vanhu vepasi kuburikidza nemuraramiro ane simba.
Water Unified Project
Iyo Alchemical Utatu Mishonga
Ruregerero Diamond - 10ml
Kununurwa - 10ml
Bhuruu Lotus - 10ml
Kuregererwa Kwekurapa Kurapa
Tevera isu pa Instagram
© Copyright 2018 Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa LiberationtheRemedy.com Zvita pawebhusaiti izvi hazvina kuongororwa neKudya uye Zvinodhaka. Chero zvigadzirwa zvinokurukurwa kana kushambadzirwa hazvifanire kuongororwa, kurapa, kuporesa kana kudzivirira chero chirwere. Ongororo mhedzisiro hadzisi dzakajairwa. Vatengi vanogona kunge vakagamuchira gwaro rezvipo mushure mekuendesa kwavo kupupurira. Kana iwe uine nepamuviri, mukoti, uchinwa mishonga, kana uine chirwere, bvunza chiremba wako usati washandisa chero chikafu chekuwedzera. ... Zvipiriso zvakaburitswa pane ino saiti, kusanganisira AutoShip zvirongwa, zvinoshanda kune vatengesi vevatengesi chete, kwete varapi kana vatengesi vekutengesa. Mahara kutumira kwemahara kunoshanda kune vatengi veUS chete.